China SOC na njikwa gụnyere 36V 40Ah LiFePO4 batrị mkpọ maka eletriki skuuta / ọgba tum tum / bompa ụgbọ ala Manufacturer and Supplier | LIAO
1. Na aka na SOC 36V 40Ah LiFePO4 batteyr mkpọ maka ụgbọ ala bompa.
2. Ọpụpụ dị elu ugbu a: ihe kachasị dị ugbu a nwere ike ịbụ 80A nke bụ 2C.
Model Nke CGS-F3640N
Elu igwe 36V
Elu ọnụ 40Ah
Max. na-aga n'ihu ụgwọ ugbu a 80A
Max. na-aga n'ihu na-agbapụta ugbu a 80A
Ibu ibu Banyere 20kg
Akụkụ 305mm * 168mm * 230mm
Ngwa Pụrụ iche maka bọmbụ ụgbọ ala, ngwa ọkọnọ ngwa, ect.
3. Ngwunye ọla na SOC na aka.
4. Ndụ okirikiri ogologo: Rechargeable lithium iron phosphate batrị cell, nwere ihe karịrị 2000 cycles nke bụ oge 7 nke batrị acid na-eduga.
5. Light light: Gburugburu naanị 1/3 ibu nke na-eduga acid batrị.
6. Ezigbo arụmọrụ na nchekwa: LiFePO4 bụ ụdị batrị lithium kachasị dịrị nchebe na ụlọ ọrụ ahụ.
7. Green ike: Enweghị ihe ọ bụla na-adọrọ adọrọ na gburugburu ebe obibi.
Cargbọ ala batrị batrị anaghị achọ nhazi saịtị pụrụ iche. Enwere ike iji ya ma ọ bụrụhaala na ebubo ya zuru ezu. Ọ dị mfe iji. Ihe izugbe bụ: a na-eji ígwè rụọ chassis, ma mee ka mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị na plastic.
Bompa ụgbọ ala batrị: Emere ya site na nchedo gburugburu ebe iko iko na - eme ka plastic sie ike n'otu oge, akụkụ igwe na - agbasa ma na - eme ya, kwadebere ya na ọdịyo dị elu, nhazi, ọkụ, ọrụ oge, wdg. -fading, environmentally friendly, corrosion na-eguzogide ọgwụ, Ọ nwere àgwà nke ezi kwụsie ike, mara mma anya, akwụkwọ style, ezi nchekwa arụmọrụ, na a dịgasị iche iche nke venues. Ọ bụ ewu na ntụrụndụ ngwá site ahịa na ụmụaka.
N'ezie, dịka nyocha nke iji arụmọrụ, nchekwa, ịdị mma, ọsọ na ihe ndị ọzọ nke ụgbọ ala bombu, ụgbọala nwere ike ịkewa n'ime: Tiandi.com bumper cars and batum bumper cars. N'ezie, n'ime usoro abụọ a, ha dị n'oke ojiji na ojiji nke ụgbọala batrị. Bụ nke kasịnụ.
Ọ bụ ezie na ụgbọ ala batrị batrị bụ ngwaahịa dị elu na ụlọ ọrụ ụgbọ ala na-agba bọmbụ, n'otu ụdị ụgbọ ala batrị batrị, a na-ekewa ụgbọ ala ndị nwere ụdị ọkwa dị iche iche dịka arụmọrụ moto ha si dị.
Nke gara aga: Akwa arụmọrụ ezigbo mma 24V 60Ah LiFePO4 batrị mkpọ maka AGV
Osote: Caravan mover batrị LAXpower-1230 12V 30Ah LiFePO4 batrị mkpọ nwere wuru na-chaja na SOC